ကျွန်မရဲ့မိုင်လိုလေး – CHAR TAKE
( သတိ – စိတ်ကူယဉ်ဇာတ်လမ်းသာဖြစ်ပါသည် )
မိုးသဇင် အသံကုန်ခြစ်၍ အော်လိုက်သည်။ အရင်က သူ့အမေ လေသံမာမာနှင့် ပြောလာလျှင် တခွန်းမှပြန် မပြောရဲပေမဲ့ ဒီတခါတော့ သူ့အသံကို မေမေကြားသွားမှာ လုံးဝမကြောက်။မကြောက်ဆို သူဘယ်လောက်အော်အော်၊ဘယ်လောက် အသံကျယ်ကျယ် အော်နေပေမဲ့ အမေမကြားနိုင်တော့ ဘူးလေ။ ဒီတော့ အော်ရဲတာပေါ့။မေမေ ခြံထဲကနေ ကားမောင်းထွက်သွားတာ ဆယ်မိနစ်လောက်တောင် ရှိနေပြီ။““ လုံးဝ မတရား ဘူး မေမ လုံးဝ မတရားဘူး . . ””ဒေါသတကြီး ခြေထောက်ကို ဆောင့်ဆောင့်ပီး အော်လိုက်ရင်း ဝတ်ထားသည့်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် အရိုးခေါင်းပုံအကြီးကြီးပါသော အနက်ရောင် တီရှပ်အင်္ကျီ ပွပွကြီးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ် ပစ်ပေါက်တင်လိုက်သည်။
ခြေရင်းနားတွင် အိပ်နေသည့် “မိုင်လို” သည် မိုးသဇင် ဒေါသတကြီး သောင်းကြမ်း နေသည်ကို နားလည် သဘောပေါက်သည့် အ လား ကုတင်ပေါ်ကနေ ဆင်းပြီး အခန်းထောင့်တွင် သွား၍ ငြိမ်ငြိမ်လေး ခွေနေလေသည်။ခွေးလိုချင်တယ် ပူစာလွန်းလို့ မွေးနေ့လက်ဆောင် အဖြစ် မေမေက ပါပီလေးတကောင် ပေးခဲ့သည်။ အင်း ခွေးစပ် နီညိုရောင်မို့ သူမက “ မိုင်လို ” ဟု ခေါ်သည်။အိမ်ရောက်ခါစက ခွေးပေါက်စ ပါပီလေးသည် ခုတော့ အရွယ်ရောက်ပြီး ခွေးလူပျိုကြီးတကောင် ဖြစ်နေပြီ။ အကောင်ထွားထွား ခေါင်းကြီးကလဲ အကြီးကြီး၊ ခြေဆံ လက်ဆံတွေက တုတ်တုတ် ခိုင်ခိုင်နှင့် ပါးဒတ်ရပ်လိုက်လျှင် မိုးသဇင်နှင့် ရွယ်တူ ဖြစ်နေပြီ။ အော်တယ်လေ. . ဘာဖြစ်လဲ . .စိတ်ဆိုးအောင် လုပ်ရင်တော့ အော်မှာဘဲ . . .““ ဟွန်း . . . ””မအေတခု သမီးတခုမို့ ဒီအိမ်တွင် မေမေ မရှိလျှင် ဘာကိုမှ ဂရုစိုက်စရာ မလို။
ခြံဝန်းကျယ်ကြီးများဖြင့် လူကုံတန် များသာနေသော ရပ်ကွက်မို့ အိမ်နီးပါးချင်း ကိုလဲ အားနာစရာ မလို။ ““ မေမေ လုံးဝ မတရားဘူး . . . ဟွန်း . . . ””သူ့ကျတော့ ကားတစီးနဲ့ သွား ချင်ရာ သွား နေပြီးတော့သူများကို ကျတော့ . . .ဒီအသက်အရွယ် ရောက်နေတာတောင် ချုပ်ချယ်ချင်နေတယ် ””သူတို့အတန်းထဲက သက်နှင်းချိုဦးတို့ဆို ရီးစားတွေထားပြီး ဝိုင်တွေ ဘီယာတွေ သောက် ဒေးကလပ်တို့ ဘာတို့တောင် သွားနေကြတာ။မျှော်စင်ကျွန်းက ရှိုးပွဲလေး သွားတာဘဲ ဘာဖြစ်မှမို့လဲ။သူက ကလေးလေး မှ မဟုတ်တော့တာ။““ နေနှင့်ဦး … ရီးစားတွေထားပြီး ကဲပစ်လိုက်ဦးမယ်. . . ””စိတ်ထဲကနေ ကြုံးဝါးလိုက်သည်။ တကယ်တော့ မိုးသဇင် ရီးစား မထားချင်သေး။ကိုယ့်ဘဝကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘဲ နေချင်သည်။ဟိုဟာ မလုပ်နဲ့ ဒီဟာ မလုပ်နဲ့တွေ မလိုချင်။ချုပ်ချယ်တာကို မကြိုက်။
ပြီးရင်ချိန်းတွေ့ တာတွေက လာဦးမည်။ စိတ်ဆိုးတာတွေ၊ စိတ်ကောက်တာတွေ။ချော့ရမှာတွေကိုတော့ စိတ်ကုန်လွန်းလို့ရီးစား ဆိုမှစဉ်းစားမိသည်။ကျောင်းမှာသူ့ကို ကြိုက်တဲ့သူရော ရှိရဲ့လား?သူငယ်ချင်းတွေထဲတွင် သူက လူကောင် အသေးဆုံး။ အညှက်ဆုံး။အုပ်စုထဲမှာ အသက် အငယ်ဆုံး ဖြစ်နေတာလဲ ပါတာပေါ့လေ။မိုးသဇင်တို့ ကျောင်းမှာ သက်နှင်းချိုဦး က နာမည်ကြီးသည်။ ရီးစား များသလို လှလဲလှသည်။ ရုပ်ရော ကိုယ်လုံးရော ပြောစရာ မရှိ။““ ငါ . . လဲ လှပါတယ်လေ”” ကိုယ့်ဟာကို ပြန်အားပေးရသည်။မနေ့ ကဘဲ မြို့ထဲ မှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်း အိမ်သွားတုံးက ကြုံခဲ့တာလေ။သူတို့လမ်းလျှောက် သွားတော့ လမ်းထဲက ဘဲကြီး ဘဲလေးတွေရဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေ နောက်ကနေ ကပ်ပါလာတာ သူသိနေတာဘဲ။ခေါ်တော ကြည့်တြေ။အဲ့လို နှာဘူးတွေကို သူသိပ်မုန်းသည်။အဲ့လို နှာဘူးကြည့်တွေကို မကြိုက်ပေမဲ့ သူ့ ကိုယ်လုံးလေး လှနေတာကိုတော့ ကြိုက်သည်။ကုတင် ခေါင်းရင်းရှိ မှန်ဘီရိုပေါ်က မှန်ချပ်တွင် ပေါ်နေသော သူ့ပုံရိပ်ကို ကြည့်လိုက်မိသည်။သက်နှင်းချိုဦးတို့လို အပြည့်အဝ ဖွံ့ထွားတာမဟုတ်ပေမဲ့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ရှိသင့်သလောက် ရှိနေပြီလို့သူထင်သည်။““ ဘာကြည့် တာလဲ . . . ငါ့ကို မမြင်ဖူးဘူးလား ?
”” အခန်းထောင့်ကနေ သူ့ကို ခေါင်းထောင် ကြည့်နေသော မိုင်လို – ကို လှမ်းပြီး ရန်တွေ့လိုက်သည်။““ နင်တို့ အထီးတွေဟာလေ . . မိန်းမမြင်ရင်ကို မနေနှိုင်ဘူး . . .””အမြီးတနန့်နန့် လုပ်နေသောမိုင်လို့ ကို ပြောဆို ဆုံးမပြီးနောက် ကိုယ်လေးကို မှန်ပေါ်တွင် ဘေးတိုက် အနေအထားဖြစ်အောင်ရပ်လိုက်ပြီး ဖင်လေးကို နဲနဲကောက်၍ ကြည့်လိုက်သည်။မြင်ရတာကို စိတ်တိုင်း မကျ။“ ဟင်း ….”သက်ပျင်းရှည်ကြီး ချလိုကသူ့တင်သားတွေက သက်နှင်းချိုဦးဟာလို လုံးပြီးတင်းမနေ။ ပြားချပ်ချပ် ဖြစ်နေသည်ဟု ထင်သည်။အပျို စစ်စစ်မှာတောင် ဒီလောက်ပြားနေရင် ယောကျာ်းရပြီး ရှောသွားရင်တော့ ဝါးချမ်းပြားက မမ ခေါ်ရမည် ထင်သည်။ဆယ်တန်းပြတဲ့ ဆရာမ အပျိုကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးသန့်ရဲ့ ဖင်ကြီးလို ထွားထွား အယ်အယ်ကြီး မျိုး မဖြစ်ချင်ပေမဲ့ သက်နှင်းချိုဦး ဟာလို လမ်းလျှောက်လိုက်ရင် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုံ တုံ သွားတဲ့ ဖင်မျိုး ကိုတော့ လိုချင်မိသညမကြေမနပ်နှင့် မှန်ရှေ့မှာ ကိုယ်လုံးလေးကို ဟိုဖက် ဒီဖက် လှည့်ကြည့် လိုက်ပြန်သည်။
“ အွန် . . . ဘောင်းဘီကြောင့်နေမှာ ပါ . . . ” စိတ်ထဲမှာ တွေးတွေးရင်း ဝတ်ထားသော ဂျင်းဘောင်းဘီတိုကို ကြယ်သီးဖြုတ်၍ တင်ပါးအောက် ရောက်အောင် လျော့ချ ကြည့်လိုက်သည်။ “ အင်း . . . ဒီလိုဆိုတော့လဲ . . .မဆိုးပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ် ကျေနပ်သွားသည်။ပင်တီ အဖြူလေးကကပ်နေတာမို့ မှန်ထဲက ဘေးတိုက် အမြင်မှာ တင်သားလေးတွေကို အတိုင်းသား မြင်နေရသည်။မဆီမဆိုင် ဖျတ်ကနဲ မြို့ထဲက ခေါ်တောတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေကို တွေးမိလိုက်သေးသည်။ အခုလို ပင်တီလေးနဲ့သာ မြင်လိုက်ရပါက သွားရည် တမြားမြားဖြင့် နောက်ကနေ လေးဘက် ထောက် လိုက်လာမည် ထင်သည်။ အမြီးရော နန့်ပြီး လိုက်လာမှာလား . . .? သူတို့မွာ နန့်စရာ အျမီးမွ မရွိတာ။ဒါဆို အမြီးရမ်းမဲ့အစား ဟိုဟာကြီးပဲ တရမ်းရမ်းနဲ့ နေမယ်ထင်သည်။
ပေါက်ကရတွေးမိပြီးမှ “ ခိ ” ကနဲ ရယ်လိုက်မိသည်။ကိုယ်ကို မှန်ဘက် လှည့် တည့်တည့်ရပ်ပြီး မျက်နှာ ချင်းဆိုင် ကြည့်လိုက်သည်။ မြင်နေရသော သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်က ကျေနပ်စရာ ကောင်းသည် ဟုထင်သည်။ဘိုက်သား ဖွေးဖွေးလေးက ချပ်နေသည်။ဆီးခုံလေးက ဖေါင်းနေသည်။လက်တွင်ကိုင်ထားသော ဘောင်းဘီကို လွှတ်၍ ကွင်းလုံးကျွတ် ချွတ်ချလိုက်သည်။ မော်ဒယ်ဂဲလေးတွေ လုပ်သလို ခြေတစ်ဖက်ပေါ်မှာ အားပြု၍ တင်ကိုတဖက်ပစ်ရပ်ထားရင်း နွဲ့ထား aသာ ခါးပေါ် လက်ထောက်၍ ကြည့်လိုက်သည်။““ အဟိ . . . မိုက်တယ် ”” ကိုယ့်ကိုယ်ကို မော်ဒယ်ဂဲလိုလို၊ မစ်စ် တွေ လိုလို စိတ်ကူးယဉ် လိုက်မိပြန်သည်။မှန်ရှေ့မှာ ပို့စ် မျိုးစုံ ပေးကြည့်သည်။အခန်းထောင့် ဖိနပ်စင်ပေါ်က ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်ကို သွားစီးပြီး မှန်ရှေ့ကို ဟန်နဲ့ပန်နဲ့ ပြန်လျှောက် လာသည်။ကိုယ်ကို တပတ်လှည့် ကြည့်သည်။““ အား ..ပါး . . . ””
သူ့ကိုသူပင် မယုံနှိုင်။ဒေါက် ဖိနပ်ကြောင့် တင်လေးကပိုပြီး ပေါ်လွင်လာသည်။မှန်ထဲတွင် မြင်နေရသောခါးသေးသေး တင်ကားကား လေးနှင့်ပုံရိပ်သည် ကလေးမလေး မဟုတ်တော့၊မိန်းမတယောက်အဖြစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲနေလေပြီ။ခါးသိမ်ပုံ တင်ကားပုံကတော့ တော်တော်လေး အချိုးကျသည်ဟုထင်သည်။ဒိထက် အသက်နဲနဲ ပိုကြီးလာရင်တော့ သက်နှင်းချိုဦးတို့လိုပင် တင်သားတွေ ပြည့် လာမှာပါလို့ စိတ်ကို ဖြေမိသည်။တခါ၊ မှန်ကို ကျောပေးလိုက်ပြီး ခြေနှစ်ဖက်ကို ခပ်ကားကားလေးရပ်၍ ပုခုံးပေါ်မှကျော်ကာ နောက်ပြန်လှဲ့ ကြည့်လိုက်ပြန်သည်။ဝတ်ထားသော ပင်တီနှင့် ဘရာစီယာကြောင့် ဘီကနီ မော်ဒယ် ပုံ မပေါက်။ပုံက တုံး နေသည်။
ဘရာစီယာချိတ်ကိုလက်နောက်ပြန် ဖြုတ်လိုက်ပြီး အနားမှာမော့ကြည့် နေသော မိုင့်လို့ ခေါင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။““ ခိ . . ခိ . .””ဘရာစီယာကို ခေါင်းပေါ်ကနေ ခါချနေသော မိုင်လိုကို ကြည့်ရင်း သဘောတွေ ကျနေသည်။မှန်ရှေ့တွင် ရပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ပြန်သည်။ တကိုယ်လုံးတွင် ပင်တီလေးသာ ကျန်တော့သည်။နဲနဲလေးကျပ်နေတော့ ပေါင်ခွကြားက အက်ကြောင်းလေးကို မြင်နေရသည်။ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းတွင်တော့ ဘာအဝတ်မှ မရှိ။နို့လေးတွေကို ကြည့် မိတော့ နဲနဲ စိတ်ပျက်သွားသည်။““ အဲ့ဒါ မေမေ့ကြောင့် ”” လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အုပ်ကိုင် ကြည့် ရင်း တွေးလိုက်သည်။သူ့ အမေ ဒေါ်ချိုချိုမြင့် သည်လဲ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်သေးသေး ရင်သားသေးသေး မိန်းမတယောက် ဖြစ်လေသည်။နို့ဆိုတာ ကိုင်ပေးနယ်ပေးရင် ကြီးလာတတ်တယ်လို့ သူကြားဖူးသည်။တကယ်တန်း ဟုတ် မဟုတ်တော့ မိုးသဇင် မသိ။
““ သက်နှင်းချိုဦး ဟာကြီး ကြီးနေတာ ဟိုလူကိုင်ဒီလူကိုင် အကိုင်ခံထားရလို့ နေမှာ ”” မနာလို အတွေးလေးတွေးမိလိုက်သည်။ သူ့နို့လေးတွေက သေးရုံမက နို့သီးလေးတွေကလဲ အထဲကိုဝင်နေလိုက်သေးသည်။ထိပ်ကလေးကို လက်ခလယ် အဖျားလေး ဖြင့် ဖြေးဖြေးလေး ပွတ်ပေးလိုက်တော့ နို့သီးလေးတွေ ထောင်ထလာသည်။““ အဟိ ””ကျောထဲ မှာ ကျက်သီးတွေ ထသွားသည်။သူ့ တကိုယ်လုံး သွေးလည်ပတ်မှု မြန်လာသည်ဟုထင်မိသည်။ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာပြီး ကိုယ်ထဲတွင် နွေးထွေးသော ဓါတ် တခုစီးဆင်း နေသလို ခံစားလာရသည်။ ညာဖက်လက်ဖြင့် သူ့ ဘယ်ဖက် နို့လေးကို ပွတ်သပ် ကစားနေစဉ် ကျန်လက် တဖက်က ပေါင်ခွကြားကို အုပ်ကိုင် ထားမိသည်။ခွကြားက ကိုယ်ငွေ့ နွေးနွေးကို ခံစား မိသည်။ပင်တီ အဝတ်သားပါးပါး အောက်က အရည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်စ ပြုလာပြီကို သူ သတိထား မိလိုက်သည်။ သူ့လက် ကို ဘိုက်ပေါ် ပြန်ရွှေ့လိုက်ပြီး လက်ချောင်းလေးများကို ပင်တီအောက်ထဲသို့ လျောသွင်း လိုက်လေသည်။အမွှေးပြောင်ရှင်းနေသော သူ့ ဆီးခုံလေးက ချောမွတ်နေသည်။အကွဲကြောင်း အစပ်လေးကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်သပ် ပေးနေမိသည်။
ကုတင် အစွန်းတွင် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ပင်တီလေးကို လျှောချလိုက်သည်။ခြေကျင်းဝတ် အထိ ရောက်သွားတော့ ခြေတဖက်ကို ချွတ်ထုတ် လိုက်ပြီး ပေါင်လေးကို ကား ထား လိုက်သည်။တောင်ကြားလမ်းထွင် ရေလျှံနေပြီ။အပေါက်ဝတွင် စွတ်စိုနေသော အချွဲရည်လေးများကို လက်ခလည် အဖြားလေးဖြင့် တို့ကြည့် လိုက်သည်။တင်းထောင်စ ပြုနေပြီ ဖြစ်သော အစေ့လေးကို အချွဲရည်လေးများ သုတ်လိမ်းပေးလိုက်သည်။ အသက် ရှူသံတွေ မြန်နေပြီ။သွေးခုန်နှုံးတွေ မြင့်တက်လာသည်။မျက်နှာလေးကရဲလာသည်။ထောင်ထနေ သော နို့သီးလေးတွေကို အချွဲရည်လေး ဖြင့် တို့လိမ်းရင်း လက်ဖြားလေးဖြင့် လှိမ့်ပေးလိုက်သည်။““ ဟား .. . . ”” ရင်ထဲမှာ တင်းကျပ်နေသော လေတို့ ကို ပါးစပ်ကနေ ရှူထုတ် လိုက်သည်။ မိုးသဇင့် စိတ်ထဲတွင် လူတကိုယ်လုံး တိမ်တိုက်တွေထဲ လွင့်မြောနေသလို ခံစား နေရသည်။အပူပိုင်းရပ်ဝန်းက တိမ်တိုက်တွေလေ။ နွေးနေသည်။တချက်တချက်တကိုယ်လုံးကို ဖြတ်စီးသွားသော အ ရသာက လျှပ်စီး လက်လိုက် သလိုပင်။ရင်ထဲမှာတင်းကျပ် လှိုက်မောနေသည်။
ကိုယ်တွေ့ မရှိဘဲ စာတွေ့ သာ ရှိသူမို့ ဘာကို တမ်းတရကောင်းမှန်း မသိ ။နွေးထွေးသော အပွေ့ အဖက်ကိုလား? ချိုမြိန်တယ် ဆိုတဲ့ အနမ်းတွေကိုလား?ယောကျာ်းတယောက်ရဲ့ ကြံ့ခိုင်တဲ့ ရင်ခွင် တခု ကိုဘဲ တမ်းတ ရမှာလား?သူ ချစ်သူ ရှိလာလျှင် ဘယ်လောက် အထိ လိုက်လျှောမိမလဲ ?အတွေးတွေ ပြန့်လွင့်နေသည်။ လက်တဖက်က ရင်သားလုံးလုံးလေးတွေကို အုပ်ကိုင် ပွတ်နယ်မိနေစဉ်၊ ကျန်တဖက်က သူမ အဖုတ် လေးကိုဆော့ ကစား နေသည်။အချွဲရည်လေးများ စွတ်စိုနေသော အဖုတ်ပေါက်ဝနှင့် အတွင်းနှုပ်ခမ်းသား ဖေါင်းဖေါင်း လေးတွေကို လက်ခလယ် အဖျားလေးဖြင့် ပွတ်သပ် ပေးနေချိန်တွင် “ အာဝု ” ဟူ မိုင်လို အီလိုက်သော အသံကို ကြားလိုက်သည်။ပြန့်လွင့်နေသော စိတ်တွေ မိုးသဇင်ရဲ့ အသိထဲ ပြန်ရောက်လာသည်။ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ ဖင်ကြီးကို နောက်ပြစ်၍ ရှေ့ခြေ နှစ်ချောင်းကိုဆန့်ထားရင်း အညောင်းဖြေနေသည့် မိုင်လိုကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ဒီအကောင် အပြင်ထွက်ချင်နေပြီ ထင်တယ် . . . “ကောင်းနေတုန်း နှောက်ယှက်ပြီ . . . ”စိတ်ထဲက ရေရွတ်လိုက်သည်။ခုလိုအချိန်မှာတော့ ထပြီး တံခါးမဖွင့်ပေးနှိုင်။ အခန်းပြင် ထွက်ချင်ရင်လဲ ပြီးတဲ့အထိသာ စောင့်ပေရော့ ကိုယ်တော်။အတွေးတို့ ကို လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းခွင့် ပြုလိုက်သည်။ပေါင်လေးကို ကား၍ အဖုတ်လေးကို ကော့ထားရင်း လက်ခလယ်ကို အထဲသို့ ဖြေးဖြေးချင်း ထည့်လိုက်လေသည်။““ အင်း.. ဟင်းဟင်း .. ””နှုပ်ဖျားက မပွင့်တပွင့် ညည်းသံနှင့်အတူ နောက်ထပ် ရသလှိုင်းလုံးတခု လှိမ့်တက်လာပြန်သည်။မိုးသဇင်ရဲ့ တင်ပါးသားတွေတင်းတောင့်သွားလိုက်၊ ပြေလျော့သွားလိုက် ဖြစ်နေသည်။ သူမရဲ့ စိတ်တွေက ပေါင်ကြားမှာဘဲအာရုံ စိုက်မိနေတော့သည်။လက်ခလယ်တချောင်းထဲနဲ့ အားမရတော့။လက်သူကြွယ်ကိုပါ ပူးထဲ့လိုက်သည်။အဝင်အထွက်ကို မှန်မှန် လုပ်ပေးနေရင်း ကျန်လက် တဖက်ဖြင့် အစိလေးကို ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည်။ခေါင်းကလေးကို မော့ထားရင်း ပါးစပ်ဖြင့် အသက်ရှူနေရသည်။
““ အေမ့ . . .””ရုပ်တရက် လန့်သွားသည်။ပေါင်ကြားကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ မိုင်လို့ ခေါင်းကြီးကို တွေ့လိုက်ရသည်။သူ့လက်ကိုလာထိသည်မှာ မိုင်လို၏နှာခေါင်းအေးအေးကြီး ဖြစ်ကြောင်း သတိ ထားမိလိုက်သည်။ကြည့်နေစဉ်မှာပင် မိုင်လိုကသူ့ပေါင်ကြား ခွဆုံကို လျှာဖြင့် ယက်လိုက်သည်။ဖင်ပေါက်နားလေးကို လျှာနွေးနွေးကြမ်းကြမ်းကြီးက ပွတ်သပ်သွားသည်။“အိုး …” တခါမှ မကြုံဖူးသေးသည် လှိုင်းလုံးကြမ်းကြီးက ကျောရိုး တလျှောက် လှိမ့်တက်လာသည်။ကြက်သီးတွေ ထသွားသည်။မိုင်လိုယက်ပေးတာကို ဖီးတက်သွားရသော သူ့ အဖြစ်ကို ဘယ်လိုမှ နားမလည်နှိုင်။မိုးသဇင်လေး ရှက်သွားလေသည်။အိပ်နေရာက ထထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ ပေါင်ကြားထဲက မိုင်လို၏ ခေါင်းကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တွန်းဖယ် လိုက်သည်။မိုင်လိုက ပေါင်ကြားကို အတင်း တိုးဝင်ရင်း လျှာဖြင့် လျက်ပေးလိုက် ပြန်သည်။ အကွဲကြောင်းလေး တလျှောက် လှန်ပြီးလျက်လိုက်သော လျှာချက်က တနှာ ရှိန်ကြောင့် ဖူးထနေသော အတွင်းနှုပ်ခမ်းလေး များနှင့် အစေ့လေးကို ပွတ်တိုက်သွားသည်။
““ အီး . . . ”” တခါမှ မကြုံဖူးသော အရသာထူးကြောင့် ဖင်ပေါက်လေး ရှုံ့သွားရသည်အထိ ကောင်းသွားလေသည်။ တော်တော် ဆိုးတဲ့ အကောင် . .“ မိုင် လို . . .ဘ”အားသန်လှသော မိုင်လိုကို အတင်း တွန်းထုတ်ရင်း ရှက်ရှက်ဖြင့်ဖိ အော်လိုက်သည် ။ဟုတ်သည်လေ။ဒီလို လုပ္စရာလား။ မိုင်လို ဘာကြောင့် လုပ်သည်ကို နားမလည်နှိုင်။ ကုတင် ခြေရင်းတွင် ငုတ်တုတ် ထိုင်နေသည့် မိုင်လို့ကို မျက်မှောက်ကြုံ့ပြီး ကြည့်လိုက်သည်။““ နှာဘူး မကျနဲ့ . . . နင်နဲ့ ငါနဲ့ က မောင်နှမ တော်တယ် ””ပြူးကြောင်ကြည့် နေသော မိုင်လို့ ကို မျက်နှာထား နဲ့ ကြည့် လိုက်သည်။ပါးစပ်ကြီးဟပြီး အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသံနှင့် အတူ ထုတ်ထားသော လျှာကြီးက လှုပ်နေသည်။ နွေးထွေးသော ခံစားမှုတခုက မိုးသဇင်ရဲ့ ပေါင်ကြားကနေတကိုယ်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့ာလေသည်။အဲ့ နေရာကို ကောင်လေးတွေနမ်းတယ်လို့သူကြားဖူးသည်။
စာတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးသည်။တွေ့ကြုံဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောပြဖူးသည်။အဲ့လိုလုပ်ပေးတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိသလို၊မကြိုက်တဲ့သူတွေလဲ ရှိသည် တဲ့။သူကေရာ?ပြောရလျှင် မိုးသဇင် ကြိုက်သည်။အဲ့ဒီ အရသာကြီးက အရမ်း ရင်ခုန်စရာ ကောင်းသည်။ဒါပေမဲ့ . . . မိုင်လိုက လုပ်ပေးတာ ဆိုတော့ …““ မဖြစ်နှိုင်ပါဘူး လေ …လူကြားလို့ မတော် . . ”” ကိုယ့်အတွေး နှင့်ကိုယ် ရှက်သွား ပြန်သည်။ ခေါင်းထဲမှာ အတွေးနှစ်ခုက နပမ်း သတ်နေသည်။မိုင်လို့ လျှာကြီးကို ငေးစိုက်၍ ကြည့်နေမိသည်။ရုတ်တရက်ကြီးမို့ ရှက်နေသော်လည်း မိုင့်လို့ လျှာကြီးရဲ့ အရသာကို သူမ ကြိုက်နေပြီ ဖြစ်သည်။စိတ်ထဲမှာက ချီတုံ ချတုံမထင်မှတ်ဘဲ ကြုံလိုက်ရသည့် အတွေ့ အကြုံသစ်ကို မြည်းစမ်း ချင်နေသည်။
ဒါပေမဲ့ . . .စိတ္ထဲမွာ ဝေခြဲမရ။မတော်တဆ တယောက်ယောက် သိသွားမှာလဲ စိုးသည်။သိစရာ အကြောင်းတော့မရှိ ။ ဒီကိစ္စသည် သူနဲ့မိုင်လို ဘဲ သိသည် အကြောင်း ဖြစ်သည်မိုင်လိုက စကားမတတ်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်ပြောမှာမဟုတ်။ကျောင်းက ကောင်လေးတွေနဲ့ ရီးစားထားရတာထက်တောင် စိတ်ချရသေးသည်။ဘယ်သူမှ မသိနှိုင်။တွဲလောင်းကြီးထွက်နေသော မိုင်လို့လျှာကြီးကို ကြည့်မိပြန်သည်။“ မဖြစ်ပါဘူးလေ . . . ”နောက်ဆုံးတော့ မိုးသဇင် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။““ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လက်နဲ့ လုပ်တာဘဲ ကောင်းပါတယ်””မိုးသဇင် အိပ်ယာပေါ်သို့ ဖြေးဖြေးချင်း နောက်ပြန် လှန်ချလိုက်သည်။ပက်လက်လေး အိပ်ပြီး ညာဖက်လက်က နို့လေးကို ကိုင်တွယ် ကစား နေပြီး ဘယ်ဖက်လက်ဖြင့် အစေ့လေး ဘေးနားကို ပွတ်ပေးနေမိသည်။ဘယ္လိုမွ အာရုံ စိုက္လို့ မရ။မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထားပေမဲ့ မိုင်လိုရဲ့ ပူနွေးတဲ့ လျှာကြီးကိုသာ စိတ်ကူးထဲမှာ မြင်နေသည်။အရင်ကလည်း မိုင်လို သူ့ကို လျှာနဲ့ လျှက်ဘူး တာဘဲလေ။
ခုလို အဖုတ်ကိုတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။သူနဲ့ ဆော့ကစားရင်း လက်တွေ မျက်နှာတွေကို လျှက်ပေးနေကျ ဘဲဟာ။ခုရော ဘာထူးလဲ . . .နေရာလေးဘဲ ကွာတာဘဲလေ . .ဟုတ်တယ် မလား . . .အိပ်ယာပေါ်တွင် တံတောင်ဆစ် တဖက်နှင့် ထောက်၍ မိုင်လို့ ကို ကြည့် လိုက်သည်။ဒီကောင်ကြီး ဂဏှာမငြိမ် ဖြစ်နေသည်။ခြသေ့င်္ထိုင်- ထိုင်နေရာက မတ်တတ် ထရပ်လိုက်သည်။ နောက် ပြန် ထိုင် သွား ပြန်သည်။မိုင်လိုနှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံသွားသည်။ ခေါင်းကြီးစောင်းပြီး ကြည့်နေသော မိုင်လို့ကို လျှာထုတ်ပြီး ပြောင်ပြလိုက်သည်။ကြည့်ရတာ ယက်ပေးချင်ပုံရသည်။““ ငါလဲ နင်ယက်ပေးတာ ခံချင်တာပါဘဲဟာ . . . ””““ ၀ှူး . . . . ”” ပါးစပ်က နေ လေတွေ မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ရင်ထဲမှာ တင်းကျပ်နေသည်။နောက်တော့ သူမရဲ့ ကိုယ် အောက်ပိုင်းကို ကုတင်စွန်းသို့ လျောချလိုက်ပြီး ဒူးကိုကား၍ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲပေးထား လိုက်မိသည်။ဒီတခါ လာယက်ပေးရင်တော့ ပေးလုပ်လိုက်ပါမယ်လေ ဟု တွေးမိသည်။
အမှန်ကတော့ ဒီလို မလိုက်လျောသင့်မှန်း သိနေသည်။တကယ်ဆိုရင်အားလုံးကို ရပ်တန့်ပြီး အဝတ်တွေ ပြန်ဝတ်သင့်ပြီ။ဒါပေမဲ့ . . . .ဒါပေမဲ့ပေါ့ လေ . . .သူ အထာတွေပေးနေပေမဲ့ မိုင်လိုက နားမလည်။ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ထိုင်လိုက် ထလိုက်နှင့် ဂနာ မညိမ် ဖြစ်နေသည်။ မိုင်လို ယက်ပေးချင်နေမှန်းသူသိသည်။သူကလဲ ယက်ပေးစေချင်သည်။ဒါပေမဲ့ မိုင်လိုက အနားကို မလာ ။နေနှိုင်လွန်းသည့် မိုင်လိုကို သူစိတ်မရှည်တော့။လွန်ဆွဲပွဲမှာ သူ ရှုံးပြီး အလျော့ ပေးလိုက်သည်။““ လာ . . မိုင္လို . . . ဒီအနားကိုလာ . . . ”မဝန့်မရဲ အသံဖြင့် ခေါ်မိသည်။ ကိုယ်လိပ်ပြာကိုယ် ကလည်း နဲနဲ ရှက်နေမိသည်လေ။မိုင်လိုက နားရွက် ၂ခုကို ထောင်ပြီး သူ့ကိုစောင်းငဲ့ကြည့်ရုံမှ အပ လုံးဝ မလှုပ်။အာခေါင်တွေ ခြောက်နေသည်။ရင် ထဲမှာ အသက် ရှူရတာ မဝ သလို ဖြစ်နေသည်။တံထွေး ကို မြိုချ လိုက်ရင်း အသက် တမြှင်ကို ၀အောင် ရှူလိုက်သည်။
““ လာ . .မိုင္လို . . .ဒီအနားကိုလာ . . . လာ မမ အနားလာ . .. ””ဒီတခါ အသံက နဲနဲကျယ်လာသည်။မိုင်လို ဆတ်ကနဲ မတ်တတ် ထရပ်လိုက်သည်။သူမ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို မိုင်လိုက လက်ခံလိုက်သဖြင့် ရင်ထဲမှာ ထိတ် ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ တဆက်ထဲမှာပင် ရှက်စိတ် တခုကလဲ ဖြန်းကနဲ ထသွားရသည်။မိုင်လို့ကို သူမက ဖိတ်ခေါ်ရသတဲ့လား ?အင်းပေါ့လေ . . .လိုချင်သူက လျော့ရမှာပေါ့။နှလုံးခုံသံ တဒုန်းဒုန်းကို ပြန်ကြားနေရသည်။ နားထင်မှာ သွေးတိုး နေတာကို သိနေ သလိုပင်။ ခြောက်နေသော နှုပ်ခမ်းများ ကို လျှာဖြင့် သပ်လိုက်မိသည်။မိုင်လိုသည် မိုးသဇင်၏ ပေါင်ကြားကို ဝင်လာပေမဲ့ တပေခန့် အကွာတွင် ရပ်နေသည်။““လာ . . . မိုင္လို လာ . . . . မမ အနား ကိုလာ . . . ””အချိုသာဆုံး အသံဖြင့် ချော့ပြီး ခေါ်လိုက်သည်။မိုင်လိုသည် သူမကို စိုက်ကြည့် နေသည်။ ခုနတုန်းက သူ့ကို တွန်းထုတ် ခဲ့သဖြင့် စိုးရိမ်နေပုံရသည်။““ လာ . . . မိုင်လိုလာ . . . မမ ကို လာယက်ပေး . . . ””အသံချိုချိုလေး ဖြင့် ခေါ်လိုက်ရင်း သူ့ အဖုတ် နှုပ်ခမ်းသားလေး ၂ခုကို ဘယ်ဖက်လက်၏ လက်ညှိုး၊ လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းဖြင့် ဖြဲပေးထားလိုက်သည်။
မိုင်လိုကသူ့လည်ပင်းကို ဆန့်တန်းရင်းအနားကပ်၍အနံ့ခံလိုက်သည်။မိုင်လို အသက် ရှူထုတ်လိုက်သော လေနွေးနွေးက သူ့ အဖုတ်ကို လာထိသည်။နမ်းကြည့် ပြီးတော့ မိုင်လို နောက်ဆုတ် သွားပြန်သည်။မိုးသဇင်က ကုတင်စောင်းမှာ ကိုယ်ကို အနဲငယ် ထက်၍ လျောချလိုက်ပြီး သူ့အဖုတ်လေးကို မိုင်လိုနှင့် ပိုနီးသွားရန် တိုးပေးရင်း . . . ““ ယက်လေ မိုင်လို . . . ယက်လိုက် ”” ဟု ပြောလိုက်သည် ။ ဒီတခါတော့ မိုးသဇင် သူ့ကို စိတ်မဆိုးမှန်း မိုင်လို သေချာသိ သွားပုံ ရသည်။သူ့ နှာခေါင်း မဲမဲကြီး ကို လျှာဖြင့်တချက်သပ်လိုက်ပြီး အနားသို့တဖြေးဖြေး တိုးလာလေသည်။““အု . . .”” အသံပြုရင်း အနားတိုးလာသည်။
မိုင်လို့ ခေါင်းကြီး အဖုတ်နား ကပ်လာသည်ကို ကြည့်ရင်း နှလုံးခုန်သံတွေ ပိုပြီး ပြင်းထန်လာသည်ဟု ထင်မိသည်။ ၂ လက် မလောက် အကွာမှာတော့ လျှာကြီးကို ထုတ်ပြီး “ ပလပ် ” ကနဲ မြည်အောင် ယက်လိုက်သည်။အဖုတ်လေးကို ဖြဲပေးထားသဖြင့် အတွင်းသား လေးတွေကို ထိထိမိမိ ယက်မိသွားသည်။“အ …..”အဖုတ်လေးကို ပွတ်သပ်၍လည်းကောင်း အထဲကိုလက်နှစ်ချောင်အထိ ထဲ့၍လည်းကောင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်တိုင် အာသာ ဖြေခဲ့ဘူးသော်လည်း မိုင်လို လုပ်ပေးတာလောက် ကောင်းသည့် အရသာမျိုး မရဖူးခဲ့။မိုင်လို သူ့လျှာကြီးကို ပြန်ရုပ်လိုက်ပြီး နောက်တခါ ယက်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ဒါပေမဲ့ ဒီတခါမှာတော့ ရဲရဲတင်းတင်း ရှိလာပုံ ရသည်။ အဖုတ် အကွဲကြောင်းတလျှောက် ကို ထိထိမိမိကြီး ယက်ပေးလိုက်သည်။အဆုံးနားတွင် အစိလေးကိုပါ လျှာဖြားခပ် သွားလေသည်။မိုးသဇင်သည် အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက် အိပ်ချလိုက်ပြီး အဖုတ်လေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖြဲပေးထား မိတော့သည်။ သူမ၏ အပျိုစင် စောက်ဖုတ်လေးကို မိုင်လို စိတ်ကြိုက် သုံးဆောင်နှိုင်ရန် လုံးဝ ပေးအပ်မိတော့သည်။အသက် ရှူသံ ပြင်းပြင်းနှင့် အတူ အပျိုပေါက်မလေး၏ ရင်အစုံ မှာ နိမ့်ချီမြင့်ချီုဖြစ်နေလေသည်။
““ အို့ … အေမ့ ..””အောက်နှုပ်ခမ်းလေးကို ဖိကိုက်ရင်း အသံမထွက်အောင် ညည်းတွား မိလိုက်သည်။ပိုပြီး ထိထိမိမိရှိစေရန် အဖုတ်လေးကို မိုင်လို့ဆီ ကော့ပေးလိုက်ချိန်နှင့်မိုင်လိုကလဲသူ့ လျှာကြီးဖြင့် အောက်ကနေ လှန်ယက်လိုက်ချိန် ဆုံသွားပြီးဖင်ပေါက်ဝလေးကိုပါ ယက်မိသွားလေသည်။ထိုအတွေ့အကြုံသည်လဲရင်ထဲတွင်လှိုက်ကနဲ ဖြစ်သွားစေသောအတွေ့အကြုံဟု အသိအမှတ်ပြု လိုက်မိသည်။မိုးသဇင်၏ တင်ပါးလေးသည် ကုတင်စွန်းကနေ ခပ်လျှောလျှောလေး ကျနေပြီဖြစ်သည်။ မိုင်လို တချက်တချက် ယက်ပေးလိုက်တိုင်း တင်ပါးလေးတွေရှုံ့သွားပြီး အဖုတ်လေးက ကော့တက်သွားလေသည်။ ဖင်ပေါက်လေး ကြုံ့သွားပြီး ကျောရိုးတလျှောက်မှာ အရသာ လျှပ်လှိုင်းတွေက ထိုး ထိုးပြီး တက်လာသည်။သွေးခုန်နှုံးတွေ မြင့်တက်လာပြီး အသက် ရှူသံတွေ မြန်လာသည်။ သွေးဖိအားနှင့် နှိုးဆွမှုကြောင့် အဖုတ် နှုပ်ခမ်းသားလေးများမှာ အစွမ်းကုန် ဖေါင်းကြွ၍ နေလေသည်။ အစေ့လေးမှာလဲ ထောင်ထနေပြီး အထိအတွေ့ အရသာကို ပိုမို၍ ခံစားရလေသည်။မိုင်လိုမှာလဲ မိုးသဇင်၏အဖုတ်လေးက ယိုစိမ့်လာသည့် ကာမချိုရည်များကို ကုန်စင်အောင် ကြိုးစားပမ်းစား ယက်ပေးရင်း မြိန်ယှက်စွာ သုံးဆောင်နေလေသည်။သို့သော်လဲ ယက်လို့ ကုန်နှိုင်သည် မရှိဘဲ ထွက်လေ ယက်လေ၊ ယက်လေ ထွက်လေ သံသရာ ပင်လယ်ကျော ထဲတွင် မိုးသဇင် တို့ နစ်မျောနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင် တခု လုံးကို မေ့လျော့နေတော့သည်။
ပေါင်ကို အစွမ်းကုန်ကားထားပြီး အဖုတ်လေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပါ ကူ၍ ဖြဲပေးထားသဖြင့် မိုးသဇင်လေး၏ အပျိုစောက်ဖုတ်ဝလေးမှာ ပွင့်ဟနေပြီး တချက်တချက်တွင် မိုင်လိုရဲ့ လျှာဖြားဖြင့် အတွင်းသား များကိုပါ နှိုးဆွ ခံနေရတော့သည်။နောက်ဆုံးတွင် မိုင်လိုသည် အားမလို အားမရ ဖြစ်လာကာသူ့ နှုပ်သီးကြီးကို အဖုတ်အကွဲကြောင်းတွင် ထိုးကပ်ထားလိုက်ပြီး အရည်များ စိမ့်ထွက်ရာ အခေါင်းလေးကို အာရုံစိုက်၍ ယက်ပေးနေလေသည်။ တခါထက်တခါ မိုင်လို့ လျှာကြီးက အထဲကို ပိုမိုဝင်ရောက်လာပြီး အတွင်းသားလေးများနှင့် သေးပေါက်သည့် အပေါက်လေးကိုပင်ပွတ်တိုက်မိနေတော့သည်။““ တော်တော်သန်တဲ့လျှာကြီး””ဟုစိတ်ထဲတွင်သတိ ထားမိသည်။တခါမျှ မကြုံဘူးသေးသော်လဲ အခေါင်းလေးထဲကို ထိုးမွှေနေသော လျှာကြီးက သူ့ကို ယောကျာ်း တယောက်က တက်လုပ်ပေးနေသလို ဖြစ်နေမည်ဟု တွေးမိလေသည်။
လျှာကြီး အထဲကိုဝင်ဝင် သွားတာကခံရတာ ကောင်းပေမဲ့ အစေ့လေးကို အချက်တိုင်း မထိတော့သောကြောင့် ကောင်မလေးသည် သူမ၏ဘယ်ဖက်လက်ကို ဆီးခုံပေါ် အုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး လက်ခလယ်လေး ဖြင့် အစေ့လေး အပေါ်နားကို ခပ်သွက်သွက် တဆတ်ဆတ် ပုတ်ခပ်ပေးလိုက်လေသည်။ညာဖက်လက်ကတော့ လက်ညှိုး၊လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းဖြင့် နှုပ်ခမ်းသားလေးတွေကို မိုင်လို့ အတွက် ဖြဲပေးထားလိုက်သည်။အစေ့လေးကို မြူဆွပေးနေသော အရသာနှင့် အဖုတ်လေးထဲ ထိုးထိုးဝင်နေသည့် လျှာကြမ်းကြီး၏ အရ သာသည် မိုးသဇင်လေး၏ အသိစိတ်များကို လွှမ်းမိုးသွားတော့သည်။တနှာရှိန်တွေ ကောင်းကင်ကို တိုက်နေသဖြင့် လောကကြီးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့သွားသည်။ မရှက်တမ်း မကြောက်တမ်းပင် အသံထွက် ညည်းတွားလာမိတော့သည် ။““ မိုင်လိုရယ် . . . ကောင်းလိုက်တာ . . . ငါ အရမ်းကြိုက်နေပြီ . . .””
အပျိုမလေးသည် သူ၏ဆီးခုံနား တဝိုက်ဆီက ထူးဆန်းသော ခံစားမှုတမျိုးကို သတိပြုမိလေသည်။သူအရင်က အာသာဖြေချိန်များတွင် ကြုံဘူးသောအရသာနှင့် ဆင်သလိုလို ရှိသော်လည်း၊ ဒီတခုကတော့ အများကြီးပို၍ သက်ရောက်မှု ရှိလေသည်။မျက်လုံးလေးကို မှိတ်ပြီး လျှာကြီးကို အာရုံပြုထားသည်။ အဖုတ်တဝိုက်နှင့် ဆီးခုံနားဆီက လှိုက်လှိုက် တက်လာသော ခံစားမှုကြောင့် သူမ ကာမရှီန် အထွဋ် အထိပ်ရောက်နေပြီကို သိသည်။ပြီးခါနီးနေပြီကို သိနေသည်။““ ကောင်းလိုက်တာ မိုင်လိုရယ် . . . ကောင်းလိုက်တာ . .အသက် ပြင်းပြင်း ရှူနေရသည်။ရင်ထဲ မှာ လှိုက်ဖိုနေသည်။ပေါင်ခွကြား အဖုတ် တဝိုက်ကလေ ကျောရိုးတလျှောက် ဖြာတက်လာသော အရသာက တကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့သွားသည်။ အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးနေရင်း ပါးစပ်ကလည်း ထင်ရာမြင်ရာများကို ယောင်ရမ်းရေရွတ်နေတော့သည်။
မိုင်လိုသည် အဖုတ်ထဲကို သူ့လျှာကြီး ထိုးထည့်ပြီး ယက်ပေးနေရာက ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်သည်။““ မိုင်လို . . . ဆက်လုပ်လေဟာ . . ငါ အရမ်းကောင်းနေပြီ . . ””မိုးသဇင် တောင်းဆို နေပေမဲ့ မိုင်လိုက အဖုတ်ကို ဆက်ပြီး မယက်တော့။““ လုပ်ပေးလေဟာ . . ငါပြီးတော့ မယ် . . ”” မိုးသဇင်မချင့်မရဲနှင့် ပြောလိုက်သည်။သူမ ပြီးလု ပြီးခင်မှာမိုင်လိုက ရပ်လိုက်သဖြင့် ဆန့်တငံ့ငံ့ ကြီး ဖြစ်သွားရသည်။အစေ့လေးကို သွက်သွက် ပွတ်ပေးလိုက်ရင်း သူမတယောက်တည်း ပြီးအောင် အားစိုက် လုပ်နေမိသည်။မျက်လုံးလေးကို မှိတ်ရင်း မိုင်လို လျှာနဲ့ လျက်တဲ့ ခံစား မှုကို ပြန်လည် ပုံ ဖေါ် နေမိသည်။အတွေးထဲ မှာကတော့ မိုင်လို စိတ်ပြောင်းသွားပြီး ထပ်ယက်ပေးမှာကို မျှော်လင့် မိသည်။ကုတင် သိမ့်ကနဲ လှုပ်သွားပြီး မိုင်လို၏ ရှေ့ခြေနှစ်ချောင်း သူမ ဘေးတဖက်တချက်တွင် လာထောက်သည်ကို သိလိုက်သဖြင့် မိုးသဇင် မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။သူမအပေါ်ကို အုပ်မိုးနေသော မိုင်လို၏ ခေါင်းကြီးကို နီးကပ်စွာတွေ့မြင်လိုက်ရသည်။““ဟဲ့ .. မိုင်လို… ဘာလုပ် .. ””
သူမ စကားမဆုံးမှီ နွေးထွေးသော အရာတခုကသူမ၏ ပေါင်ကြားတွင် ဟိုတိုးဒီတိုး ထိုးနေသည်ကို သတိထားမိလိုက်သည်။ပေါင်ကြားကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ . . .““ ဟယ် … ခွေးယုတ်မာ ..”” မိုးသဇင် လန့်အော်လိုက်သည်။မိုင့်လိုရဲ့ ဟာကြီးကို မြင်လိုက်ရတော့ သူတကယ် လန့်သွားသည်။အတန်ကြီး တချောင်းလုံးက နီရဲနေသည်။ဒုံးပျံကြီးလို ထိပ်ကြီးက ချွန်နေသည်။ညှောင့်လိုက်တိုင်း ထိပ်ချွန်က သူ့ပေါင်ခြံနှင့် အဖုတ်လေးကို ထိုးမိနေပြီး တချက်တချက်တွင် အဖုတ် အပေါက်ဝလေးကို လာထိမိလေသည်။မိုင်လိုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိလိုက်သည်။မိုးသဇင် ရီချင်သွားသည်။မိုင်လိုက သူ့ ကို ခွေးမလေး ထင်နေသည်လား မသိ။ တက်လုပ်ဖို့ ကြံစည် နေလေသည်။““ ဒါတော့ မရပါဘူးနော် . . . နင့်ကိုလျှာနဲ့ ဘဲ ပေးယက်တာ . . . ””တခစ်ခစ် ရယ်ရင်း အပေါ်က အုပ်မိုးနေသော မိုင်လို့ ကို တွန်းဖယ် လိုက်သည်။မိုင်လို့ ကိုယ်ကြီးက တော်တော်လေးသား။သူအားစိုက်တွန်းတာတောင် မရွေ့။“ အေမ့ . . ”မိုင်လို့ ဟာကြီး ထိပ်ဖျားက အထဲကို ဝင်လာသည်။မယုံကြည်နှိုင်သော အံ့သြခြင်းနှင့်အတူ မိုးသဇင် ခေတ္တခနမှင်သက်သွားမိသည်။ထိုတဒင်္ဂလေးက မိုင်လို့ ကိ အခွင့်အရေးပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားလေတော့သည်။
မိုင်လိုက အဆက်မပြတ် ဆောင့်နေရင်း ရှေ့ကို တလှမ်း တိုးလိုက်သည်။ထိပ်ပိုင်း ဝင်မိနေပြီ ဖြစ်သဖြင့် ဆောင့်ချက်တိုင်းသည် ဘေးမချော်တော့ဘဲ တချက်ထက် တချက်အထဲကို ပိုဝင်လာသည်။သူမ စောက်ဖုတ်လေးထဲမိုင်လို၏ လီးကြီး သိသိသာသာလဝင်နေပြီကိုခံစားမိလိုက်သည်။““ မိုင်လို . . . ဖယ်ပေး . .ဖယ်ပေး . . . အယုတ်တမာ . . .”” ပါးစပ်ကလဲ အော်ရင်းအတင်းရုံးလေသည်။ မိုင်လိုကတော့ လျှာကြီးကို ထုတ်၍ အသက် ရှူသံ တဟဲဟဲ ပြုရင်း ညှောင့် နေလေသည်။မိုင့်လို့ လီးတန်ကြီး သူ့ အထဲတော်တော်လေးဝင် နေပြီကို သိနေသည်။အဆက်မပြတ်ဒလစပ် ဆောင့်နေ သော ညှောင့်ချက်တိုင်း သူ့ အထဲကို ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် ဖြစ်နေသည်။မိုးသဇင် ဘယ်လိုမှ လက်မခံနှိုင်ဘဲ တွန်းဖယ် နေပေမဲ့ မိုင်လို ကတော့ လုံးဝ ဂရု မစိုက်တော့။မိုးသဇင်နှင့် ရေကုန်ရေခန်း မိတ်လိုက်ရန်သာ ကြိုးစား နေလေသည်အကြောက် အကန် ရုန်းနေရသည့် ကြားကမှ မိုင့်လို့လီးတန်ပူနွေးနွေးကြီး အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်မိလိုက်တိုင်း တကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့သွားသော အရသာထူးကိုလဲ တချက်တချက် သတိထားမိလိုက်သေးသည်။သဘာဝ အသိပေးလို့ဘဲ ပြောရမည်ထင်သည်။
မိုင်လိုသည် သူ့လီး မိုးသဇင်၏ အဖုတ်လေးထဲ ဝင်နေပြီကို သိသဖြင့် တချောင်းလုံးထိုးသွင်းနှိုင်ရန် အတင်းဘဲ ဆောင့်ဆောင့်ပြီး သွင်းနေလေတော့သည်။ထိပ်ဖြားလေး တင် မကတော့ ။ အတင်း ကြိုးစား ပြီး ရုန်းနေပေမဲ့ အခြေအနေက သူ့ကို မျက်နှာသာ မပေး။မထင်မှတ်ဘဲတချီတွင် မိုင်လို့ဟာကြီး တော်တော်များများသူ့ အထဲကိုဝင်လာကို သိလိုက်သည်။““ဟယ် . . . သွားပါပြီ . . . ””အဖုတ်ထဲတွင် တင်းကျပ်သွား သလို ခံစား လိုက်ရသည်။မိုင်လို၏ လီးကြီး တချောင်းလုံး သူ့ အဖုတ်ထဲ တိုးဝင်လာတာကို သိလိုက်ချိန်တွင် မိုးသဇင် ခေါင်းနပန်း ကြီး သွားသည်။မိုင်လို သူ့ ကို ပါကင် ဖွင့်လိုက်ပြီဟု နားလည်မိလိုက်သည်။ထင်ထားသလိုနာတာကျင်တာတွေ မရှိတာကို အံ့သြမိလိုက်ရင်းတချိန်ထဲ မှာပင်မိုင်လိုကို အတင်း တွန်းဖယ်ဖို့ လုပ်မိသည်။အဖုတ်ထဲကို အဝင်အထွက် လုပ်နေသော အတံကြီးက ပူနွေး နေသည်။““ မိုင်လို . .သေချင်းဆိုး . . ရပ် .. ရပ် … အယုတ်တမာကောင် . .””အခြေအနေကို သဘောပေါက်လိုက်သည်နှင့် လန့်ပြီး ကားပေးထားသော ခြေနှစ်ချောင်း ကို ဆွဲစေ့ လိုက်ရင်း အပေါ်ကအုပ်မိုးနေသော မိုင်လို ကိုတွန်းဖယ်ဖို့ မရ မက ကြိုးစားမိသည်။မိုင်လိုကတော့ မိုးသဇင်ကို ခွေးမလေးများ ထင်မှတ်နေသည်လား မသိ။တချောင်းလုံးဝင် နေပြီ ဖြစ်သဖြင့် ခါးကို သူ့ရှေ့ခြေ နှစ်ချောင်း ဖြင့် ကုတ်တွယ်ထားရင်း သွက်သွက်ကြီး လိုးပေးနေတော့သည်။“ အ . . . အ… ”
မိုင်လို့ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းသည်။ပူပူနွေးနွေး အတံ မာမာကြီးက အဖုတ်ထဲ မှာ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်။ မိုင့်လို၏ လီးကြီး တချောင်းလုံး သူမ၏ အဖုတ်ထဲ ထွက်လိုက် ဝင်လိုက် ဖြစ်နေပြီကို သိလိုက်ပြီးနောက် ဘာကြောင့် မှန်းမသိ ဆက်လက် ရုံးကန်ချင်စိတ်တွေ ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်။ ခြေတွေ လက်တွေ လေးလံလာသည်။ခြေနှစ်ချောင်းကို ဆန့်တန်းထားရင်း အတင်း လိမ်ထားမိသည်။ အဝင် အထွက်တိုင်း အစေ့လေးကိုပွတ်မိနေသော အရသာကို ဘယ်လိုမှ မညင်းဆန်နှိုင်။ မိုင်လို့ ကို ခွေးတကောင်မို့ အဖြစ် အပျက်ကို လိပ်ပြာမလုံသော်လည်း အင်မတန်ကောင်းသော အရသာကို ဖြစ်စေသည်ကတော့ အမှန်ပင် ဖြစ်လေသည်။တဖြေးဖြေး အားအင်တွေ ကုန်ဆုံး လာသလို ခံစားရသည်။တွန်းဖယ်နေသော လက်တွေက လျော့ရဲလာသည်။နောက်ဆုံးတော့ ရှက်မျက်နှာကို လက်ဖဝါး နှစ်ဖက်ဖြင့် အုပ်ထား လိုက်သည်။ပါးစပ်က “ မိုင်လို . . နင် သိပ် ယုတ် မာတယ် သိလား . . ”ဆို တာကို ထပ်ခါတလဲလဲ ရေရွတ်နေသည်မှ အပ ကုတင်စောင်းတွင် ပက်လက်ကလေး ငြိမ် နေရင်း မိုင်လို လုပ်သမျှကို ခံနေမိတော့သည်။
သူမ အဖုတ်လေးထဲတွင် မိုင်လိုရဲ့ လီးကြီးသည် ပိုပြီးတင်းကျပ်လာသည်။လီးကြီးကဘဲ ကြီးလာတာလား သူ့အဖုတ်လေးကဘဲ ကျဉ်းသွားတာလားတော့ မိုးသဇင်မသိ။အဖုတ်ထဲမှာတင်းကျပ်လာသော အရသာနှင့်အတူ သူမတကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားလောက်အောင် ထူးဆန်းသော လှိုင်း တခုက ဖြတ်သန်းသွားသည်။ပထမ တခု မဆုံးခင် နောက်တခု။ပြီးတော့ နောက်တခု။ဆင့်ကဲတက်လာသော အရသာလှိုင်းတွေ ၏ ချိုမြိန်သော ရက်စက်မှုကို မိုးသဇင် တောင့် မခံနှိုင်တော့ . . .ခြေချောင်းခေးတွေ ကုတ်ကွေးလာပြီး လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မွေ့ယာ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို အတင်းကုတ်တွယ်ထား မိသည်။မိုင်လို ငြိမ်သွားသည်။ပါးစပ်က တအိအိ ဖြင့် အော်နေသည်။မိုးသဇင် ဆီးခုံတဝိုက်ဆီက ခံစားချက် တခုသည် ဝမ်းဘိုက်ဆီကို လှိမ့်တက်လာသည်။မိုင်လိုကိုယ်ကြီးတဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီးအရည်နွေး နွေးတွေ သူမကိုယ်ထဲ ပန်းထဲ့လိုက်တာကို ခံစားမိလိုက်သည်။တချီ . . .နှစ် ချီ . . .
ကိုယ်ထဲမှာ နွေးသွားတာကို သိနေသည်။အရည်တွေကို ကုန်စင်အောင် ပန်းထုတ်ပြီးတော့ . . မိုင်လို နောက်ကိုဆုတ်သွားသည်။““ ပ လွတ် ” ဆိုသော အသံနှင့် အတူ မိုင်လို့ ဟာကြီး သူ့ အထဲက ထွက်သွားသည်။အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက်ကလေး ကျန်နေသော မိုးသဇင့် အဖုတ်ထဲမှာ ဟာတာတား ဖြစ်သွားသလို ရင်ထဲ မှာလဲ ဟာပြီး ကျန်ခဲ့သည်။လူတကိုယ်လုံး မလှုပ်ချင်လောက်အောင် မောပန်းသွားသည်။ ““ ၀ှူး . . . ” သက်ပြင်း ရှည်ကြီး ကို မှုတ်ထုတ် လိုက်ရင်း ဘာတွေ ဖြစ်သွားမှန်း မသိတော့သည့် သူမ အခြေအနေကို အံ့သြ နေသည်။ဒါပေမဲ့ ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အရသာ ကတော့ ပြောမပြတတ်အောင် ကောင်းလွန်းလှသည်။မိုင်လို လုပ်သွားသည့် နေရာလေးကို လက်ဖြင့် စမ်းကြည့်လိုက်သည်။နှုပ်ခမ်းသားလေးတွေက အရင်တုံးကလို စေ့စေ့လေး မနေတော့။အဲ့ဒီနား တဝိုက်က ပူနွေးနေသည်။ မိုင်လို့ ကိုယ်ငွေ့ ကြောင့် ဟု ထင်သည်။ခနလောက် ပက်လက်ကလေး ငြိမ်ပြီး လှဲနေပေမဲ့ မိုင်လို ချန်သွားသော အထဲက အရည်တွေက ထွက်ကျနေဆဲ။
““ များလိုက်တဲ့ ဟာတွေ . . . ”” မှိန်းနေရင်း စိတ်ထဲမှာ တွေးမိသည်။အိပ်ယာခင်းတွေ ပေကုန်မှာ စိုးတာကြောင့် ကုတင်ပေါ်မတက်ရဲဘဲ အသာလေး ကုတင်ပေါ်ကနေ လျောချဆင်းလိုက်ပြီး အောက်တွင် ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်လိုက်သည်။ဒူးတွေက တဆတ်ဆတ် တုန်နေသေးသည်။““ ဟယ် . . . ”” မိုင်လို့ ဟာတွေက ကြမ်းပေါ်တွင် အကွက်လိုက်ကြီး စိုရွှဲနေသည်။သူ့ အထဲဝင်သွားသော အရည်တွေကလဲ အထဲကနေ တစက် တစက် ထွက် ကျနေဆဲ။ခနနေလို့ သူ့ကိုယ်ထဲက လှိုင်းတံပိုးတွေ ငြိမ်သက်သွားတော့မှ သူ့ဟာကိုသူ ယက်ရင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်နေသောမိုင်လို့ အနားတွင်သွား ထိုင်ပြီး ကြည့်လိုက်သည်။မိုင်လို့ဟာကြီးက နဲတာကြီးမဟုတ်။ဒီဟာကြီးတချောင်းလုံး ဝင်သွားအောင် ခံနှိုင်တာကို မိုးသဇင် သူ့ဟာသူ အံ့သြနေသည်။အရင်းပိုင်းက ဘုလုံးကြီးကို တွေ့လိုက်တော့ လန့်သွားသည်။
““ အဲ့တာ ကြီးသာ ဝင်သွားရင်တော့ . . . . ””တွေးပင် မတွေးရဲ စရာ။ခွေးတွေ မိတ်လိုက်သလို ပူးနေမည် ထင်သည်။နောက်တခါ တော့ သတိထားမှဟု စိတ်ထဲတွင် တေးမှတ်ထားလိုက်သည်။အမှတ်တမဲ့ စဉ်းစား လိုက်ပြီး မှ ကိုယ့် အတွေးကိုကိုယ် အံ့သြသွားသည်။“ နောက်တခါ ”တဲ့လား . . .မိုင်လိုနှင့် နောက်တကြိမ် ဆိုသည့် အတွေး သူ့ခေါင်းထဲ ဘယ်လို ရောက်သွားလဲမသိ။မိုင်လိုကသူ့ဟာကြီးကို ယက်ပြီးသန့်ရင်းရေး လုပ်နေရာက . . .အနားတွင် စောင့်ကြောင့် လေးထိုင်ကြည့် နေသော မိုးသဇင်၏ ပေါင်ကြားသို့ ခေါင်းကြီးထိုးဝင်လိုက်ပြီး အဖုတ်လေးကိုယက်ပေးလိုက်သည်။မိုးသဇင်က မိုင်လို၏ ခေါင်းကြီးကို တွန်းဖယ်လိုက်ရင်း ““ တော်ပါပြီ … ကိုကို မိုင်လိုရယ် … နောက်တချီဆို ကျမ သေလိမ့်မယ် … မနက်ဖန်မှ . . မနက်ဖန်မှ နော် . . ”” ဟု ပြောလိုက်လေတော့သည်။ (ပြီးပါပြီ…..။) crd